China Small Winding Machine Ukwakha futhi Factory | Imishini ye-Youte
Umshini okhiqizwa yifektri yethu usetshenziselwa ngokukhethekile ukukhiqiza amakhoyili amancane. Ishayelwa yimoto, futhi kunebhokisi lokulawula ukufaka ubude obunikeziwe. Ngemuva kokucindezela inkinobho yokushintsha, izoma ngokuzenzakalela lapho ubude obucacisiwe bufinyelelwa. Umsindo osebenzayo walo mshini uphansi ngokweqile. Izinhlobo ezahlukahlukene zalolu chungechunge lwemishini zingenziwa ngokuya ngezidingo. Umshini unezici zokuklanywa okufanele, isakhiwo esilula, ukusebenza okuzinzile, ukusebenza okuhle, ukusebenza kahle okuphezulu nokunakekelwa okulula.
Incazelo Yomshini Oyincani Encane
Igama: Ucingo oluvalwe ngocingo Olugoqiwe oluncane
Ukusetshenziswa: esetshenziselwa ukwakhiwa kwentambo yokwakha, ukubopha ingadi, ubude, ububanzi be-roll, ukupakisha kungenziwa ngokuya ngezidingo zamakhasimende, ezilula, ezisheshayo nezinhle.
Ucingo oluncane oluhlanganisiwe luhlukaniswe ngocingo oluhlanganisiwe oluhlanganisiwe, i-PVC encane ehlanganiswe ngocingo, intambo encane ehlanganisiwe, insimbi engagqwali intambo encane ehlanganisiwe, ucingo oluhlanganiswe ngethusi oluncane oluhlanganiswe nocingo, ucingo lwethusi oluncane oluhlanganisiwe, njll.
Imininingwane: Ububanzi obungaphakathi 4 cm \_ 5 cm \_ 6 cm \_ 10 cm Okunye ukucaciswa kungenziwa ngezifiso ngokuya ngezidingo zamakhasimende.
Wire ubukhulu: 0.6-4mm
Izinto: ucingo olumnyama, i-pvc, ucingo oluhlanganisiwe.
Intambo encane ehlanganisiwe ekhiqizwayo isetshenziselwa ukwakhiwa kocingo lokusiza, isisindo cishe siyi-1-1.5 kg, futhi isisebenzi singayithwala emzimbeni ukuze siyisebenzise kalula. Ububanzi obungaphakathi bungu-4.5-5 cm, ububanzi obungaphandle bungu-11-12 cm, futhi ubukhulu bungamaphuzu okusebenza ama-4. Kungaba futhi ngokuya ngezidingo zamakhasimende Ukukhiqizwa, ukubukeka kuphathwa ngokuvikela ukugqwala ukuvimbela ukugqwala.
Langaphambilini Ingadi Net Machine
Umdwebo Wocingo Wocingo